Duuliye diyaaradeed oo "khalkhal geliyay" ammaanka goorka Amsterdam - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Duuliye diyaaradeed oo “khalkhal geliyay” ammaanka goorka Amsterdam
November 7, 2019 at 12:33 Duuliye diyaaradeed oo “khalkhal geliyay” ammaanka goorka Amsterdam2019-11-07T12:33:27+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Cabsi iyo jahawareer ayaa ka dhacay garoon ku yaal magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands, ka dib markii uu duuliye diyaaradeed si kama ah uu u taabtay badhan loogu tala galay xilliyada ay jiraan halista amni sida afduub diyaaradeed.
Duuliyahaasi oo ku sugnaa garoonka Schiphol ee magaalada Amsterdam ayaa badhankaasi gurmadka taabtay waxana markiiba heegan la geliyay laamaha ammaanka.
Milatariga dalkaasi Netherlands ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu baaritaan ku hayo cabsi amni oo ka jirta garoonkaasi.
Hindiya: Caro ka dhalatay haween naafa ah oo loo diiday inay diyaarad raacaan
Qeyb ka mid ah garoonkaas ayaa la xiray, xilli boolisku ay isku dayayeen in ay ka hortagaan halistaasi amni ee cabsida abuurtay.
Haseyeeshee saacad ka dib ayay shirkadda Air Europa sheegtay in duuliye uu si kama ah u taabtay badhanka gurmadka oo loogu talagalay oo kaliya xilliyada ay jirto halista amni.
Laamaha ammaanka ayaa qeylidhaantaas u qaatay halis afduub taas oo sababtay in la xiro qeybo ka mid ah garoonka.
“Wax dhacay ma jiraan. Dhammaan dadka rakaabka ahi way bad qabaan, waxayna sugayaan in diyaaraddu ay duusho. Aad ayaan uga xunnahay wixii dhacay,” ayay qoraalkeeda ku tiri shirkaddaasi.
Wax yar ka hor inta aysan soo bixin warbixintaasi shirkadda Air Europa, ayuu milatariga Netherlands shaaciyay in dhammaan dadkii rakaabka ahaa ee la socday diyaaraddaas iyo shaqaalihiiba halkaasi laga daad gureeyay oo ay bad qabaan. Duullimaadka ay diyaaraddaas sameyneysay wuxuu ku wajahnaa magaalada Madrid ee dalka Spain.
Sawir lagu baahiyay baraha xiriirka bulshada ayaa muujinayay qaybo ka mid ah garoonkaas oo xiran isla markaana shacabka loo diiday in ay galaan.
Qaar ka mid ah diyaaradaha ayaa loo ogolaaday in ay ka soodegaan qeybo ka mid ah goroonka, balse markii laamaha gurmadka deg degga ay gudaha u galeen garronka, waxa diyaaradaha qaar lagu hakiyay dhabbaha ay diyaaradaha ku duulaan ama kusoo degaan.
Roberto Carrera ayaa ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee ka soo degay garoonkaas xilligii ay cabsi weyn ka jirtay, wuxuuna sheegay in duuliyihii diyaaraddii ay la socdeen uu ku wargeliyay in xaalad ay ka jirto gudaha garoonka, laguna amray in aysan diyaaraddu degin.
Wuxuu sheegay in muddo saacad ah loo diiday in ay diyaaradaha ka degaan oo gudaha ay u galaan garoonka.
Waxaa jira sharci dhanka duulimaadyada ah oo uu Mareykanka soo hindisay oo ah in duuliyeyaashu ay badhan taabtaan haddii ay dareemaan halis amni, sida afduubka oo kale.
Illaa iyo hadda lama oga sababta uu duuliyahaas u taabtay badhankaas khalkhalka geliyay garoonaka.
Garoonka diyaaradaha ee Amsterdam ayaa ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan qaaradda Yurub, waxaana sannadkiiba ka duula ama ka soo dega 70 milyan oo qof oo rakaab ah.
« Why is the World Ignoring Somaliland?
Barcelona Shaqada Way Ka Caydhin Doontaa Ernesto Valverde Haddii Uu Hal SHURUUD Oo Ay Ku Xidheen Deg-Deg U Fulin Waayo & Tababaraha Bedelaya »